Azores anticyclone na - eme ka mmiri ghara izo na Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmiri ozuzo emesiela na ala anyị, n'agbanyeghị na ọ ga-eme ya obere oge, ọ dị nwute. Mmiri ezobeghị kemgbe ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ ụbọchị iri ise, ugbu a ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na Spen niile mmiri zoo mmiri ọzọ.
Oge ụkọ mmiri ozuzo anyị na-adọta na-ebelata oke mmiri mmiri na, ya mere, mmiri mmiri nke mba anyị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na mmiri ga-ezo na ụbọchị ole na ole sochirinụ, ọnọdụ nke nkwụsi ike nke anticyclonic na-atụ anya ịlaghachi n'izu na-abịa. Kedu ihe kpatara Spain ji nwee mgbe niile anticyclone na ezigbo ihu igwe? Ihe kpatara ya bụ n'ihi Azores Anticyclone. You chọrọ ịmatakwu banyere ya?
Anticyclone nke Azores
Mgbe oge ọkọchị rutere na ọnụọgụ nke radieshon nke anyanwụ ka ukwuu, mpaghara nrụgide dị elu nke na-etolite anticyclone na-aza. Antyclone na-arụ ọrụ dị ka ọta ma ghara ikwe ka ihu gafere ọtụtụ Spain, ya mere, mmiri agaghị ezo. Naanị ebe a na-enweghị nchebe bụ ugwu, ya mere, ọ ga-ekwe omume ịmịpụ n'ihu nke gafere na etiti Europe. Maka nke a, oge ọkọchị anyị na-edeba obere mmiri ozuzo na ọtụtụ ụbọchị anwụ na-acha, ọ bụ naanị n'ebe ugwu ka anyị nwere ike ịchọta mmiri ozuzo karịa.
N'oge oyi, anticyclone a na - adị obere ma gbadaa na ndịda. Ọnọdụ a ga-ekwe ka ntinye nke fronts si Atlantic na naanị ụfọdụ ndịda na Canary Islands ka a ga-echebe. Ọ ga-enyekwa ohere ohere ịbanye na ikuku ikuku oyi site na ugwu.
Eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ isi mmiri ma ọ bụ akpaaka na-acha ma ọ bụ na-erughị, na-adabere na oscillations nke Azores anticyclone, ọ naghị agagharịkarị nke ọma, ma ọ na-agbago elu na ala. Mgbe ụgbọ mmiri ahụ tụgharịrị, ọ na-eme ka ndị nọ n’ihu banye na mpaghara Iberian Peninsula, mgbe ọ tụgharịrị, ọ na-egbochi ndị mmadụ ịbịaru nso ala anyị, na-enye anyị ụbọchị anwụ na-acha na ihu igwe dị mma.
Site na ozi a ị nwere ike ịmaraworị ihe kpatara anyị ji nwee ihu igwe siri ike na mpaghara anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Kedu ihe kpatara mmiri ji ezo na Spain?
Ohia osisi na-enye aka na okpomoku nke uwa